တကယ်ချစ်မှာလား… ? အပျော်တွဲမှာလား ? (အတည်ကြံချင်သူများအတွက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » တကယ်ချစ်မှာလား… ? အပျော်တွဲမှာလား ? (အတည်ကြံချင်သူများအတွက်)
တကယ်ချစ်မှာလား… ? အပျော်တွဲမှာလား ? (အတည်ကြံချင်သူများအတွက်)
Posted by koyin sithu on Dec 22, 2011 in How To.., Think Different | 12 comments
လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချစ်ခွင့်ပန်လာပြီဆို ဒီလူ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်လို့လား၊ အပျော်တွဲမှာလား၊ စဉ်းစားပေးရင်ကောင်းမလား၊ ပြန်ချစ်သင့်လား၊ ပြန်မချစ်သင့်ဘူးလား၊ သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲ စသဖြင့် မိန်းကလေးတိုင်း တွေဝေတက်ကြပါတယ်။ ချစ်မိလို့ ရွေးခြယ်မိပြီဆိုလဲ ဒီလူငါ့ကို တကယ်မှ ချစ်ရဲ့လား။ ငါချစ်သလောက်ပြန်ချစ်ရဲ့လား စတဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့ ရတက်မအေးတက်ကြပါဘူး။ ဒီအတွက် ကူညီပြီးဒီဗေဒင်လေးကို ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်တယ်နော်။အလွယ်လေးပါပဲ။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်စကားပြောလာတဲ့သူရဲ့ နာမည်ကိုဗျည်းတစ်ခုစီရဲ့ နေ့နံဂဏန်းပြောင်းလိုက်ပါ။
ဥပမာ – အောင် ဆိုရင် (အ) တနင်္ဂနွေ၊ ဂဏန်းက 1 ပေါ့။ မင်းဆိုရင် (မ)ကြာသပတေး ၊ ဂဏန်းက5ပေါ့။ ထွန်းဆိုရင် (ထ) စနေ၊ ဂဏန်းက7ပေါ့ လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်း နာမည် တစ်လုံးချင်းစီကို ဂဏန်းဖြစ်အောင် ပြောင်းပြီး ကိန်းဂဏန်းတခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်ပါ။
ဥပမာ – ကျော်မျိုးမြင့် ဆိုပါတော့၊
ဗေဒင်ဆိုတာကလဲ ဗေဒင်ပေါ့။ ပုံသေကြီးတော့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ ဖူးစာဆိုတာ သတ်မှတ်ပြီးသားပါ။ ကံ ကံ၏ အကျိုးတဲ့။ ကိုယ်က အကောင်းဆုံးကိုမှလိုချင်သလို ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်ချစ်သူအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရဲ့လားလို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်း……မဖြစ်သေးဘူးဆိုကြိုးစားပါလို့အကြံပေးချင်တယ်။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ တခါတရံ ကိုယ်ရဲ့စိတ်၊ကိုယ်ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုရင် အဲဒီလိုကြီး ဒဲ့မေးတော့
၆ ကြွင်းတယ် … ဟိ
ကိုရင်က ရက်တွေ ဗေဒင်တွက်ပြီးမှ
ကိုယ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို ရွာထဲမ၀င်ခိုင်းတော့ဘူး
ဗိုက်ခေါက်ကြောတော့ ပျက်ပြီဗျို့ …
ကိုရင့်ဗေဒင်ကို အနှစ်ချုပ်ပေးမယ်။ မ ဂဏန်းဆိုရင် မကောင်းဘူး။ စုံ ဂဏန်းဆိုရင် ကောင်းတယ်။ သိချင်တဲ့လူတွေ အလွတ်ကျက်ကြပေရော့။
ကိုရင်ရေ ကိုချစ်တည်း ကောင်မလေး ကိုပြန်ချစ်အောင် အဆောင်အယောင်လေး ပေးပါဦး ဟဟဲ ကြိုးစားတုန်းမို… နေ.တူနံတူဆို အဆင်မပြေကြဘူးဆို ဟုတ်လားဗျို…
ချမ်းချမ်း လိုဘဲ ဆိုပြချင်ပါတယ်
တစ်ဂယ်ဆိုရင် ကျောက်စိမ်းပဲ လိုတယ် လုပ်ပါဆရာရယ်.
အင်း ၃ကြွင်းတော့ ခက်ပြီကိုရင်ရေ
ဒီနည်းကသုံးလို့ရနိုင်တာပဲလေ ခက်ပြီ ခက်ပြီ
ကိုရင် ဟောထားတာသိပြီးကတည်းက မအိပ်နိုင် မစားနိုင်ပါပဲဗျာ
တကယ်ချစ် ၊ တကယ်မြဲဖို့ဆိုတာ
ဓမ္မ သောက အင်းဝ ရာဇာ နဲ့တိုက်ယူ
ဗေဒင်တွေက ဟောတဲ့ နေ့နံသားသမီးတွေရှာယူ
၆ကြွင်းပါတယ် ကိုရင်ရေ သူနဲ့ပတ်သက်တိုင်းဗေဒင်ကြည့်ရင်တော့ အဖြေကတော့ သိပ်မကွာဘူး အဲလိုမျိုးတွေပဲထွက်တတ်တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုရင့်ဗေဒင်ကို လေးစားပါတယ် ၆ကြွင်းလို့
မှော်ဆရာနဲ့ ၀တ်မှုံချွေရည်နဲ့ တွက်ပေးပါ
ကိုရင်ရေ ကျနော်က ၂ ကြွင်းရတယ်ဆိုတော့ ပျော်တယ်ဗျ၊ သိုင်းကျူး ကိုရင်……..